Ravina dite, misoroka ny fihintsanan’ny volo
Anisan’ny ananantsika Malagasy be dia be ny ravina dite. Mety efa fahenontsika ny voka-tsoany amin’ny fahasalamana, fa eo ihany koa ny amin’ny hoditra.
Ankoatra ireo rehetra ireo dia tena mahatsara volo ny ravina dite maitso. Miaro amin’ny angadrano, ny fihintsanan’ny volo, fa indrindra mahalava volo ny ravina dite. Toy izao ny fikarakarana azy.
· Ravina dite maitso voatoto 4g
· Menaka kinana na menaka voanio 3 sotro fihinanana
· Voasary makirana tapany
· Rano 250ml
Apangotrahy ny rano ary arotsahy ao ny ravina dite. Araraho ao ihany koa ilay menaka kinana na voanio. Potsero ny voasary makirana. Ataovy ao anaty tavoahangy iray toy ny tavoahangina “shampooing” efa lany dia aontsano. Rehefa hampiasa azy dia ahosotra amin’ny hodi-doha no sady orina no fanaovana azy. Avela hilona mandritra ny 30 mn eo ho eo ary kobanina amin’ny rano mafana avy eo.